Visa & Socdaalka - Sumy National University Deedna
Visa & Socdaalka
Waraaqaha loo baahan yahay visa Ukraine:
Foomka Codsiga Visa Buuxinaya
Passport International (hal sano oo ansax ah oo aan ka yarayn)
Shahaadada Dhalashada (waa in la stamp shabadda ahaan ama sharciyayn Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo turjumay luqada Yukreeniyaan)
Certificates School Original (heerka O / SSCE / HSSC , Bachelor ama Master Degree ee haddii la heli karo) (waa in la stamp shabadda ahaan ama sharciyayn Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo turjumay luqada Yukreeniyaan)
General Medical Fitness Certificate (waa in la stamp shabadda ahaan ama sharciyayn Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo turjumay luqada Yukreeniyaan)
Letter of ansixinta ka Wasaaradda Waxbarashada (Waayo, West Africa Nigeria )
General Health- Certificate Medical soo saaray ugu yaraan laba bilood ka hor laga galo in si Ukraine .
Tarjumay galay Ukraine iyo sharciyayn Nootaayaha Guud ama Ukraine Safaarada (Waa in loo sharciyeeyo by Wasaaradda Caafimaadka ee West Africa , Nigeria )
Certificate Medical maqan muujinaya ee Aids / HIV (waa in la stamp shabadda ahaan ama sharciyayn Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo turjumay luqada Yukreeniyaan)
Wakiilashada Letter ka Waalidiinta / Qofka waa kuma kan inuu qaado kharashka ardayga inta / waxbarasho ee Ukraine . (Ma aha oo shardi looga dhigayo oo dhan jinsiyadaha)
Bayaanka Bank si ay u caddeeyaan awoodda dhaqaale. (Ma aha oo shardi looga dhigayo oo dhan jinsiyadaha)
8 sawiro size baasaboorka (3.5 x 4.5)
Si aad iyo From tigidh Air ansax ah muddo hal sano ah.
Warqad Xaqiijinta Visa in Safaaradda diray ka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ukraine
Ardaygu wuxuu u baahan yahay inuu ka hubi Yukreeniyaan Safaaradda in isaga / iyada dalka joogto joogtid / ku meel gaar ah. Yukreeniyaan safaarada ma u baahan tahay turjumaad oo aan Ruush / Ukrainian for dalal qaar ka mid ah.